Cajal: Habka ugu Fiican ee Lagu Wareeyo Websiteka
. Waxaa jira khabiiro badan oo maanta ah oo ogaanaya sida dhabta ah sida loo caawiyo dadka isticmaala xogta ay u baahan yihiin hal badhan. Waa farsamo cusub oo wax ku ool ah, raadiyeyaashuna waxay isticmaalaan si ay u soo ururiyaan dhammaan macluumaadka qaraabada ah si ay uga gudbaan tartamayaashooda ayna kor u qaadaan waxqabadka shirkadooda. Dhab ahaantii, waxay heli karaan tiro xog ah, sida liiska xiriirka, qiimaha, badeecadaha iyo waxyaabo kale oo badan.
Ujeeddada Webka Digriiga
Ka hor inta aanadin bogagga internetka ee kala duwan, dadka isticmaala waxay u baahan yihiin fikrad cad oo ku saabsan waxa dhabta ah ee webka loo isticmaalo. Taas macnaheedu waa in duubista webku ay tahay farsamo casri ah oo caawin kara maamulayaasha si ay u helaan dhammaan macluumaadka ay u baahan yihiin iyagoo isticmaalaya barnaamijyo kombuyuutar oo kala duwan. Habkani waxay ka soo saari karaan xogta hab fudud oo aanad waqti ku qaadan.
Sannado badan ka hor, dadku waxay ku khasbanaadeen in ay xogta ka soo qaataan website-ka gacanta. Ma ahayn hab fudud oo laga soo bilaabo sawirrada shabakadda waa inay ku qaadaan saacado badan ama xitaa maalmo, si ay u helaan waxyaabaha ay doonayaan. Laakiin waxay ku dhowdahay hawsha aan macquul ahayn ee raadiyeyaasha webka iyo barnaamijyadeyaal badan sababtoo ah ma aysan aheyn mid wax ku ool ah.
Farsamo Cusub oo Cusbooneysiin ah
Webka qashin-qaadku waa qalab weyn oo si fiican u siin kara natiijooyinkooda dhibbanayaasha isticmaalkooda marnaba. Dhab ahaantii, baarayaasha webka waxay heli karaan dhammaan xogta ay doonayaan kaliya hal guji. Waxay ku badbaadin karaan wakhti iyo tamar, iyo sidoo kale inay hubiyaan in ay soo saari doonaan tirooyinka dhabta ah ee ay doonayaan iyaga oo aan wax khalad ah samayn. Dhowr daqiiqo gudahood, waxay samayn karaan dhowr bog oo alaab ah waxayna helayaan natiijooyinka lagama maarmaanka ah.
Natiijooyin guul leh oo leh kaliya riix of a button
Ka dib oo riix badhanka ah, isticmaalayaashu waxay ku xiri karaan website natiijooyinka ay rabaan. Uma baahna inay baxaan oo ay sameeyaan cilmi baaris suuqa. Taa bedelkeeda, waxay heli karaan dhammaan macluumaadka ay u baahan yihiin kombiyuutarkooda.
Sida Loo Helo Bogga Shabakada Macaamilka Maanta Suuqa
Nidaamka ururinta qashin ururinta waa mid aad u muhiim u ah dadka haya ganacsiga. Waxay soo saari karaan oo u kaydin karaan qaddar fara badan oo aan waqti lahayn oo ku keydsan faylasha. Waa macdan qodaya oo khaldan oo aan khalad ahayn oo siinaya fursado cajiib ah dadka isticmaala.
Webka xoqitaanku wuxuu noqday qaab aad u caan ah gaar ahaan kuwa leh dukaamada dukaamada iyo lamaanayaashooda. Waxaa si sahlan loo samayn karaa waxayna fursad u siineysaa maamulayaasha iyo iskaashatooyinka si ay u falanqeeyaan sicirka iyo alaabooyinka si ka fiican. Maqnaanshaha Webka waxaa sameeya barnaamijka kombuyuutarka, kaas oo isticmaala nidaamyada xoqidda si uu u soo saaro waxyaabaha ka soo baxa bogag kala duwan Source .